Postmandu, Author at Postmandu - Page2of 349
फेसबुकले किन फेर्‍यो नाम ? यस्तो छ वास्तविकता
2021-10-29 2021-10-29 PostmanduLeaveaComment on फेसबुकले किन फेर्‍यो नाम ? यस्तो छ वास्तविकता
काठमाडौं, कार्तिक १२ २०७८ । फेसबुकले आफ्नो नाम परिवर्तन गरेको छ । फेसबुकका प्रमुख कार्यकारी मार्क जुकरवर्गले कम्पनीले नाम परिवर्तन गरेर मेटा राखिएको जानाकारी दिए । मेटार्भसमा जोड दिने उदेश्यले कम्पनीको नाम पनि परिवर्तन गरेको उनले बताए । ‘आजदेखि हामी मेटार्भस हुँदैछौं, फेसबुक होइन,’ बिहीबार कम्पनीको वार्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै जुकरवर्गले भने । ‘हाम्रो ब्रान्ड […]
2021-10-25 2021-10-25 PostmanduLeaveaComment on समिर जोशीको निर्देशनमा सत्यकथामा आधारित ‘मेरो एउटा प्रेमकथा’
काठमाडौं । चर्चित निर्देशक समिर जोशीको निर्देशनमा सत्यकथामा आधारित टेलिशृंखला मेरो एउटा प्रेमकथा निर्माण हुने भएको छ । समिर जोशी हाल प्रशारणमा रहेको T series stage work talent hunt, टेलिशृंखला- खै कुरा बुझेको ? तथा चम्सुरीसँग चिया गफका निर्देशक हुन् । उनकै निर्देशनमा सत्यकथामा आधारित टेलिशृंखला मेरो एउटा प्रेमकथा निर्माण हुने भएको हो । उक्त कथा […]
Guna Airlines starts regular flights to Biratnagar and Janakpur
2021-10-22 2021-10-22 PostmanduLeaveaComment on Guna Airlines starts regular flights to Biratnagar and Janakpur
Domestic airline Guna Airlines has started regular flights to Biratnagar and Janakpur by 30-seater Jetstream aircraft from 15 oct, managing director Diprash Shakya said. Guna Airlines is excited as it received full support from the passengers in Biratnagar on the first day of the flight. A total of seven aircraft, including two American Beachcrafts and […]
एड्रिन प्रधानको ‘अल्झिने छैन’ (भिडियो)
2021-10-22 2021-10-22 PostmanduLeaveaComment on एड्रिन प्रधानको ‘अल्झिने छैन’ (भिडियो)
काठमाडौं । संगीतकार तथा रचनाकार संजय आचार्यको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘अल्झिने छैन अब म कसैको मायाँमा…’ बोलमा रहेको गीतमा चर्चित गायक एड्रिन प्रधानको स्वर रहेको छ । गीतमा शब्द तथा संगीत संजय आचार्यको छ । म्युजिक एरेजमेन्ट, रेकर्डिङ, मिक्सिङ तथा मास्टरिङ प्रज्वल राज प्रधानले गरेका हुन् । गीतको भिडियो संजित श्रेष्ठले खिचेका […]
मैले विवाह गरेँ, ट्रोल नगर्नुस् : मनोज गजुरेल
2021-10-11 2021-10-11 PostmanduLeaveaComment on मैले विवाह गरेँ, ट्रोल नगर्नुस् : मनोज गजुरेल
काठमाडौं, २५ असोज २०७८ । चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले दोस्रो विवाहको विषयमा ट्रोल तथा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनलेसामाजिक सञ्जालमा फोटो पोष्ट गर्दै विवाहको जानकारी दिएका हुन् । उनले मञ्जु पोखरेलसँग विवाह गरेका हुन् । पोखरेल नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत हुन् । गजुरेलले ४ वर्ष अघि मीना ढकालसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका […]
घान्द्रुकमा जिप दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु
2021-10-11 2021-10-22 PostmanduLeaveaComment on घान्द्रुकमा जिप दुर्घटना, ८ जनाको मृत्यु
पोखरा, २५ असोज २०७८ । कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकमा जिप दुर्घटना हुँदा ८ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । एक जना भीरमा अड्किएर बाँच्न सफल भएका छन् । उनलाई जीवितै उद्दार गरिएको छ । ग१ज ६९०० नम्बरको जिप मोदी खोलामा खसेर दुर्घटना भएको हो । उक्त जिप नयाँपुलबाट घान्द्रुकका लागि छुटेको थियो । पोखराबाट एउटा […]